बधाई ! संसारकै महान आमा – जस्ले अटो चलाएर दुई सन्तान डाक्टर बनाउने यी महान आमालाई…उच्च सम्मान । – yuwa Awaj
बधाई ! संसारकै महान आमा – जस्ले अटो चलाएर दुई सन्तान डाक्टर बनाउने यी महान आमालाई…उच्च सम्मान ।
मंग्सिर १५, २०७७ सोमबार 0
काठमाडौ : संसारकै महान, यो’द्धा, वि’जेता, सम्माननीय जति शब्द पुकारेपनि आमा–बाबुका लागि अपुरो नै हुन्छ । जन्मदिनु मात्र हैन । हुर्का’एर योग्य बन्ने बाटोसम्म पु¥र्याउनु सामान्य चीज हैन । तपाईलाई कहिलेकाही लाग्छ होला मेरो लागि त मेरा आमा बाबुको खासै योगदान छैन म आफै सक्ने भएपछि सं’घर्ष गर्दै यहाँ आइपुगे ।
त्यो सोच छ भने तपाई मु’र्ख हुनुहुन्छ । किनकी तपाईले सोच्नु भएन की आफै सक्ने चाही कसले बनायो ? यो धर्तीमा आउँने सौभाग्य कसले दियो ? भलै कसैका लागि निक्कै ठूलो योगदान बाबु आमाले दिएको जस्तो देखिएला तर उहाँहरुको सा’मथ्र्य र हिम्मतका आधारमा सबै बाबा आमाले आफ्ना सबै सन्तानलाई समान गरेका हुन् ।
त्यही भीडमा आज हामी एक यस्तो महान आमाको बारेमा जानकारी दिँदैछौ । जो जीवनकालको ४२ औँ वर्षमापनि अटो चलाइरहनुभएको छ । आफ्नी साथी, सं’गी कोही ब’ढ्यौलीले त कोही रो’गले थलिइसके । तर कञ्चनपुरकी महान आमा गोमा (डगौ’रा) चौधरीको अझैपनि फु’र्ति फा’र्ती उही छ । बिहान देखि साँझसम्म ओटो कुदाई रहनुभएको भेटिनुहुन्छ ।
जब, पुर्न’वास नगरपालिका अमर बस्तीबाट १६ वर्षको उमेरमा उहाँको भीमदत्तनगरपालिका २ भाषिका धनबहादुर चौधरीसँग विवाह भयो त्यसपछि उहाँमाथी झनै संघर्षका दिनहरु थपिन थाले । कम’जोर आर्थिक अवस्थाले जीवन जिउन नसकिने पो हो की भन्ने निरा’शाले उहाँको परिवारलाईपनि सतायो । केही बर्षपछि एकातिर घरपरिवार र कोखबाट जन्मिने सन्तानको भविष्यको विषयले औधी चि’न्ता थपिन थाल्यो ।
खासै पढ्ने अवशर नपाउनुभएको उहाँलाई आफ्नो जीवनभन्दा सन्तानको जीवन एकदमै सुधा’रात्मक होस् भन्ने सपना जाग्न थाल्यो । कुन आमाको चाहना हुन्न र आफ्ना सन्तान सर्वो’त्कृष्ट बनुन् । उहाँलाईपनि त्यही महत्व’कांक्षाले हुटहुटी बढायो । तर अब उहाँले जीवनको सुरुवाती एकदमै सामान्य अर्थात शुन्य विन्दु’बाट सुरु गर्नु प’र्यो ।
उहाँले भविष्यको उडान साइकलबाट सुरु गर्नुभयो । साइकलमा मालसामान बो’क्दै उहाँले १५ वर्ष विताएको पत्तै भएन । उक्त अवधिमा दुई सन्तानकी आमा समेत बनिसकेपछि उहाँलाई अब यो यात्राबाट मात्रपनि आफुले देखेको सपना पुरा नहुने लाग्छ । उहाँ साइकलमा मालसामान बोकेर विक्रे’ताकहाँ पु¥याउदै गर्दा उहाँका श्रीमानले सामान्य पसल थाप्न सक्ने बन्नुभयो ।
पसलको कारोबार र साइकलमा सामान ओसार–पसार गर्दे छोरी सरिता चौधरीलाई महेन्द्रनगर स्थित बालजागृ’ती विद्यालयमा भर्ना गर्नुभयो । आफुले देखेको सपना भविष्यको योजना बारीमा भर्ख’र बिरुवा बन्न टुसाउदै गरेको बीउ जस्तै सरिता देखिन थालिन् । आमालाई झनै काममा फू’र्ती बढ्न थाल्यो । सरिताले प्रवेशिका परीक्षा बालजागृती बाटै उ’त्कृष्ट अंक ल्याएर उत्ती’र्ण गरिन् ।
छोरा सन्तोष चौध’री महेन्द्रनगर स्थित रेडि’एण्ट माध्यामीक विद्यालयमा आफ्नो भविष्यको खाका कोरिरहेका थिए । दुई सन्तानको अध्ययनको सिलसिला जारीरहेपछि उहाँले साइकल बाट अब मोटरसाइकलमा समेत मालसामान बोक्न सुरु गर्नुभयो । मोफसलमा मोटरसाईकल चलाउँने आमाको रुपमा आफ्नो परिचय बदल्नुभयो ।
उहाँको मोटरसाईकल हकाईले जीवनको यात्राको उडान अलिक तिब्र बन्यो । कमाइको बचत बाट उहाँले ६ वर्ष पहिले एउटा अटो रिक्सा पनि ख’रिद गर्न सक्नुभयो । उहाँले आफ्नो योजनालाई साकार पार्नका लागि जीवनको उडानलाई झनै तिव्र गतिमा लैजान अब अटोको साहारा लिने निर्ण’य गर्नुभयो । दुई सन्तानको भविष्य उज्ज्वलको कामना सहित उहाँ निरन्तर काममा ख’टिन थाल्नुभयो ।
लगत्तै छोरी सरिताले स्टाफ नर्स को’र्स पुरा गर्न सफल भइन् । उनले लोकसेवा मार्फ’त अनमीमा नाम समेत निकालिन्। छोरी बाजुरा स्थित बाजुरा स्वास्थ्य चौकीमा सरकारी जागिरे भएकी छिन् । अब आमाका दिन आउन थालिसकेका छन् । यता छोरा सन्तोष चौधरी भैरहवा स्थित सि’द्धार्थ मेडिकल कलेजमा एमबिबिएस (डाक्टर) अध्ययनरत छन् । उहाँलाई आशा छ अब उहाँको सपना चाँडै नै पुरा हुँदैछ ।
जीवनको सान्दर्भि’कता अँगाल्दै उहाँले आफ्नो जीवन सरह सन्तानले पनि कष्ट झेल्न नपरोष भन्ने चाहनाले अझै केही वर्ष अटो रि’क्सा चलाउने हिम्म’त राख्नुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ– ‘काम सानो ठुलो हुँदैन, आफुले उच्च शिक्षा हासिल गर्न नपाउँदा सन्तान पनि वञ्चित नहोउन् भन्नका लागि मैले विभिन्न सं’घर्ष गर्ने आँट गरे ।
साईकल, बाईक हुँदै अब अटो चलाउने पेसामा रमाइरहेकी छु ।’ अटो रि’क्सा बाट मासिक ४०–५० हजार कमाइ हुने गरेकाले आफुले देखेको सपना यो यात्राबाट अवश्य पूरा हुने उहाँको मनमा छ । अटोबाटै सन्तानलाई उ’च्चशिक्षा देखी जा’गिरे बनाउने सपना छिट्टै सकार हुनेमा म आशावादी छु भन्दा हामी समेत हर्षविभोर भयौँ । उहाँ महान आमालाई ह्दयदेखि सल्यूट । उहाँलाई अझै ति’व्र सफलताको शुभकामना !
Prevस्थानीय तहमा आज एकैदिन ३९६ अस्पताल शिलान्यास हुँदै, कहाँ-कहाँ हुँदै छ ?… हेर्नुहोस्।
Nextस्व.राजा वीरेन्द्र भन्नुहुन्थ्यो – जनताको करबाट चल्ने हाम्रो खर्च, जथाभावी खर्च गर्नु हुँदैन…हेर्नुहोस् ।
चर्चित गायिका रचना रिमाल र सइ विश्वकर्माको नयाँ गीत सार्वजनिक…हेर्नुहोस् ।(भिडियो सहित)
काठमाडौं हिँडेकी उपमेयर अमेरिकामा पुगेपछि फर्किनन्, नगरपालिकाको कामकाज पुरै अलपत्र…हेर्नुहोस् ।
प्रचण्डलाई ओलीको जवाफ – बुहारीलाई मन्त्री, छोरीलाई मेयर र भतिजोलाई राजदुत बनाउने तपाई समाजवादी हो ?
वृद्ध भत्तामा पनि राजनीति – नगरपालिका घे’राउ गर्न पुगे ज्येष्ठ नागरिक…हेर्नुहोस ।
४.	दोषी नेतामात्र कि हामी पनि ? (15)
५.	वाइफाइ कमजोर छ ? अपनाउनुस् यी तरिका (15)